जाडोमा कसरी स्वस्थ रहने? | Nagarik News - Nepal Republic Media
जाडोमा कसरी स्वस्थ रहने?
२१ पुस २०७५ ५ मिनेट पाठ
जाडोमा विभिन्न खालका भाइरसहरू सक्रिय भइरहेका हुन्छन्। जसका कारण रुघाखोकी, टन्सिलजस्ता संक्रमण बढिरहेको छ। यस्ता समस्याबाट जोगिन भीडभाडमा नजाने, जानै परे सावधानी अपनाउनु पर्छ। जस्तो, भरमर्दाे मास्क लगाउने। यस्ता संक्रमणबाट बच्न सरसफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
मौसमी रुघाखोकी लागेका व्यक्तिले अरूलाई नसरोस् भन्नका लागि आफूले प्रयोग गरेका रुमाल या टिस्यु पपेर जथाभाबी नराख्ने, सुरक्षित ठाउँमा मात्र राख्ने गर्नुपर्छ। छुट्टै ठाउँमा बसेमा अरूलाई संक्रमण हुँदैन। हातबाट भाइरस संक्रमण नहोस् भनेर सेनिटाइजर (हात सफा गर्ने तरल पदार्थ) प्रयोग गर्ने। सार्वजनिक स्थलका झ्याल, ढोका या बसका डण्डी छोएर त्यही हातले आँखा, नाक, मुख नछुने। किनकि यी भागबाट भाइरसस संक्रमण हुनसक्छ।
पोषिलो खाना खाने
चिनी र चिल्लो कम खानुहोस्। तर भिटामिन बी, सी, डी र ई भएका खानेकुरा खानामा समावेश गर्नुहोस्। पर्याप्त मात्रामा तातो झोल, अन्डा, माछा, मासु, सागपात, मौसमी फलफूल, गेडागुडी, तरकारी, पिस्ता, काजु, ओखर, एभोकार्डो, कागती, मौसम, सुन्तला जुनार, स्ट्रेबरीजस्ता चिजबिज प्रशस्त मात्रामा खाने।
पर्याप्त पानी पिउने
जाडोमा उति पानी प्यास लाग्दैन। किनकि चिसो मौसममा हाम्रो शरीरले पानीको आवश्यकता महसुस गर्दैन। तर पनि स्वास्थ्यका लागि जाडोमा पनि पानी प्रशस्त पिउनु आवश्यक हुन्छ। जाडोमा छालालाई सुन्दर राख्न तथा शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पानीले ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ। तर गर्मी मौसममा जति धेरै पानी भने शरीरलाई आवश्यक पर्दैन।
के तपाईं जाडो छ भनेर हिँड्डुल, व्यायाम तथा कुनै पनि शारीरिक काम गर्न अल्छी मान्नुहुन्छ ? सावधान ! यसो गर्नु स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ। जाडोमा खाना बढी रुच्छ। तर शारीरिक श्रम गरेनौं भने हामीले खाएका खाना शरीरमा जम्मा भएर बस्छ र त्यसले तौल तथा मोटोपना बढाउँछ। चिसोमा बाह्य सम्पर्क कम हुने डिपे्रसनसमेत हुने खतरा हुन्छ। त्यसकारण घाम लागेका बेला बाहिरफेर निस्कने साथीहरूसँग चियापान तथा भेटघाट गर्ने गर्ने गर्नुपर्छ। यसले मानिसलाई सक्रिय र फूर्तिलो बनाउँछ।
सक्दो न्यानो रहने
शरीरमा चिसो पसेमा विभिन्न रोग लाग्नसक्ने भएकाले चिसोबाट जोगिनुपर्छ। यसका लागि तातो सुप तथा खानेकुरा सेवनका साथै न्याना कपडा लगाउनु पर्छ। जाडो मौसम वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीका लागि ज्यादा कष्टकर हुने भएकाले उनीहरूले विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ।
घरमा ढुसी उम्रिन नदिनुहोस्
चिसोका कारण हामी घरका झ्याल–ढोका प्रायः बन्द राख्छौं। जसका कारण कोठामा हावा छिर्न पाउँदैन र घाम नपर्ने भागमा ढुसी उम्रिन सक्छ। यस्ता ढुसीले रुघाखोकी लाग्ने, नाक चिलाउने, आँखा चिलाउनेजस्ता एलर्जीका समस्या हुन सक्छ। यसकारण घरमा बेलाबखत झ्याल–ढोका खोलेर घरमा हावा तथा घाम छिर्न दिनुपर्छ। साथै सफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
दम व्यवस्थापन गर्नुहोस्
जाडोमा सबैभन्दा बढी दमका रोगीलाई सताउने भएकाले यस्ता समस्या भएकाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। वृद्ध उमेरका व्यक्तिले आफ्नो दमलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि नियमित सेवन गर्ने तथा न्यानोमा बसेर आफूलाई सहज पार्नुपर्छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७५ ०८:३३ शनिबार
जाडो चिसाे भाइरस संक्रमण सरसफाइ स्वस्थ